Taageerayaasha kubadda cagta oo garoommada ku soo laabanaya… (Goorta & Tirada loo ogolaan doono oo la sii ogaaday) – Gool FM
(Yurub) 24 Nof 2020. Taageerayaasha kubadda cagta ee dalka England ayaa helay war farxad leh oo ku aaddan inay goor dhow garoommada kubadda cagta ku soo laaban doonaan.
Raysal-wasaaraha Ingiriiska ee Boris Johnson ayaa ku dhowaaqay in marka la qaado xaddidaadda isu socodka dadka ee uu sababay Korona Fayras ay durba taageerayaasha kubadda cagta ku laaban doonaan garoommada si ay u daawadaan ciyaaraha ay kooxahooda ciyaarayaan.
Dowladda Ingiriiska ayaa taageerayaasha kubadda cagta u ogolaaneysa inay soo xaadiraan garoommada, balse waxaa jirta xaddidaad ku aaddan inay tiro aad u yar u xaadiri doonaan daawasha ciyaaraha kubadda cagta, waxaana lagu jaangooyay illaa taageerayaal gaaraya 4,000 (Afar kun) ay markiiba fariisan karaan kuraasta garoonka.
Dowladda dalkaas ayaa sidoo kale tibaaxday in xayiraadda xanuunka Koofid-19 la rogi doono 2-da bisha December, waxaana markaas iyo wixii ka dambeeya ay garoonka ku tagi doonaan tiro aan ka badneyn 4,000 oo qof, kuwaasoo kala fariisan doono dabaqadda koowaad iyo labaad, halka dabaqadda saddexaad ay faaruq sii ahaan doonto.
Pirlo: "Ronaldo tixgelin gaar ah kama helo Kooxda Juventus"
Dayot Upamecano ma'ahan kaliya ciyaaryahanka ka tirsan Kooxda RB Leipzig ee diiradda u saaran Manchester United